ဇယားထိပ်ရောက်လာကြတဲ့ စီးတီး နဲ့ မီလန် ၊ ၈ မှတ်ဖြတ်တဲ့ ရီးရဲ ၊ နိုင်ပွဲစရတဲ့ နယူးကာဆယ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းမျာ - xyznews.co
ဇယားထိပ်ရောက်လာကြတဲ့ စီးတီး နဲ့ မီလန် ၊ ၈ မှတ်ဖြတ်တဲ့ ရီးရဲ ၊ နိုင်ပွဲစရတဲ့ နယူးကာဆယ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းမျာ
ယမန်နေ့ ညက ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့တဲ့ ဥရောပ ထိပ်တန်းလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ အပြီးမှာတော့ အမှတ်ပေး ဇယား အပြောင်းအလဲတွေ ၊ အမှတ်ဖြတ်ထား နိုင်မှုတွေ ရှိလာခဲ့ ကြပါတယ် ။
အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် မှာတော့ ချဲလ်ဆီး ဟာ ဝက်စ်ဟမ်း ကို ၃-၂ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့တာကြောင့် အဆင့် ၃ နေရာ အထိ ဆင်းပေး ခဲ့ရပြီး လီဗာပူး က အဆင့် ၂ ၊ မန်စီးတီး က အဆင့် ၁ နေရာတွေ ကို ရယူ သွားနိုင်ခဲ့ ကြပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် အသင်းကတော့ ပွဲစဉ် ၁၅ အရောက်မှာ ဒီရာသီ ရဲ့ ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် နိုင်ပွဲ ကို ရရှိ သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ နယူး ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ဘန်လေ ကို လက်ခံ ကစားခဲ့ပြီး ကယ်လမ် ဝီလ်ဆင် ရဲ့ တလုံးတည်းသော ဂိုးနဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အီတလီ စီးရီးအေ မှာလည်း အေစီမီလန် ဟာ ဆလီနာတီတာ အသင်း ကို အိမ်ကွင်းမှာ ၂ – ၀ နဲ့ အနိုင် ယူပြီး အဆင့် ၁ နေရာကို သိမ်းပိုက် ခဲ့ ပါတယ် ။
အေစီ ကစားသမားတွေဟာ ဒီပွဲမှာ ဒဏ်ရာကြောင့် ၆ လ နားရတော့မယ့် ခံစစ်မှူး ဆိုင်မွန် ခါဂျာ အတွ် ဂုဏ်ပြု ဆုတောင်း ပေးသွားခဲ့ ကြပါတယ် ။
ရိုးမား ကတော့ အင်တာမီလန် ကို ၃-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပြီး ဒေါသထွက် နေတဲ့ ရိုးမား နည်းပြ မော်ရင်ဟို ဟာ ပွဲ အပြီးမှာ သတင်းထောက် တဦးကို “မင်းတို့ အလုပ်က ငါတို့ ထက် အများကြီး ပိုလွယ်တယ် ၊ ဒါကြောင့် ငါတို့က မင်းတို့ထက် လစာတွေ အများကြီး ပိုရနေတာပေါ့” လို့ ပြောဆို ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
စပိန် လာလီဂါ မှာတော့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ဟာ ဆိုဆီဒက် ကို ဗီနီဆီယပ် ၊ လူကာ ဂျိုဗစ် တို့ရဲ့ ဂိုးတွေ နဲ့ အနိုင် ရရှိပြီး ဒုတိယနေရာကို တက်လာတဲ့ ဆီဗီးလား ထက် ၈ မှတ်အသာနဲ့ ဦးဆောင် နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ကတော့ ရီးရဲ မာယော့ကာ ကို ၂-၁ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့တာကြောင့် ရီးရဲမက်ဒရစ် နဲ့ အမှတ်ပိုမို ကွာဟသွားခဲ့ပါတယ် ။ မာယော့ကာ အတွက် အနိုင်ဂိုး ကိုတော့ ရီးရဲ က အငှားချထားတဲ့ ဂျပန် ကစားသမားလေး ကူဘိုက သွင်းယူ ပေးခဲ့တာပါ ။
ဘာစီလိုနာ ကတော့ အခက်အခဲတွေ ကြားကနေ ရုန်းမထွက် နိုင်သေးဘဲ ရီးရဲ ဘက်တစ် ကို အိမ်ကွင်းမှာ ၁-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့တာကြောင့် ဒီရာသီ အမှတ်ပေး ချန်ပီယံဆု အတွက် မျှော်လင့်ချက် အလွန် နည်းပါး သွားပြီလို့ ဆိုရလောက်အောင် ရီးရဲမက်ဒရစ် နဲ့ ဝေးကွာ သွားခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘွန်ဒစ်လီဂါ မှာတော့ အဆင့် ၁ နဲ့ ၂ တို့ ထိပ်တိုက် တွေ့ခဲ့ ကြပြီး ဘိုင်ယန်မြုးနစ် က ဒေါ့မွန် ကို အဝေးကွင်း မှာ ၃-၂ နဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ဒေါ့မွန် အတွက် ဘားနတ် နဲ့ ဟာလန်း တို့ က ၁ ဂိုးစီ သွင်းပေး ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပြီး ဘိုင်ယန်မြုးနစ် အတွက်တော့ တိုက်စစ်မှူးကြီး လီဝန်ဒေါ့စကီး က ၂ ဂိုး ၊ ကိုးမန်း က ၁ ဂိုး သွင်းယူ ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒေါ့မွန် ကစားသမားတွေဟာ ဘိုင်ယန် ကို အနိုင် ရစေမယ့် ပင်နယ်တီ ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် မကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့ ကြပြီး ဂျုဒ် ဘယ်လင်ဟမ် က ကွင်းလယ်ဒိုင် ရဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ် တုန်းက လုပ်ပွဲ ကစားမှုကြောင့် ၆ လ အနားပေး ခံရမှု ကိုပါ ထည့်သွင်း ပြောဆို သွားခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
လေဗာကူဆင် တိုက်စစ်မှူး ပက်ထရစ်ရှစ် ကတော့ မနေ့ညက ပွဲမှာ အသင်းအတွက် တဦးတည်း ၄ ဂိုး သွင်းယူပေး သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဂျာမန် ကလပ် လိုက်ပ်ဇစ် ကတော့ နည်းပြ ဂျက်ဆီ မာ့ဆ်ချ် ကို ခန့်အပ် အပြီး ၃ လ အကြာမှာပဲ ထုတ်ပယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် လီဂူး မှာတော့ PSG ဟာ လန်းစ် အသင်း နဲ့ ၁ ဂိုးစီ သရေကျခဲ့ ပါတယ် ။ အိမ်ရှင် လန်းစ် က ၆၂ မိနစ်မှာ အဖွင့်ဂိုး ရရှိ ခဲ့ပြီး PSG အတွက် ကိုတော့ ဝိုင်နယ်ဒမ် က ၉၀+၂ မိနစ် မှာ ချေပဂိုး သွင်းယူ ပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နည်းစနစ် ဒါရိုက်တာဟောင်း မစ်ချ် အီမန်နာလို ဟာ နယူးကာဆယ် အသင်း က အားကစား ဒါရိုက်တာ အဖြစ် ကမ်းလှမ်းမှု ကို ငြင်းပယ် ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အီဂျစ် ဒုတိယတန်း လိဂ် ပွဲစဉ် တခုဖြစ်တဲ့ အယ်မတ်ဂျ် အသင်း နဲ့ အယ်လ်ဇာကွာ အသင်းတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ အယ်မတ်ဂျ် အသင်း နည်းပြဟာ သူတို့ အသင်းက နောက်ဆုံး မိနစ် သွင်းဂိုးနဲ့ အနိုင် ရရှိချိန်မှာ အောင်ပွဲခံရင်း ရုတ်တရက် နှလုံးဖောက်ကာ လဲကျ သွားခဲ့ပြီး ကုသမှု ခံယူခဲ့ပေမယ့် ကွယ်လွန် သွားခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
Previous Article နောက်ကျဂိုးနဲ့ ဂျိုတာကို အိုရီဂီ Save လုပ်ပေးခဲ့တဲ့..ဝုဖ် ဝ-၁ လီဗာပူး ပွဲစဉ်မှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာများ
Next Article လီဗာပူးဟီးရိုး အိုရီဂီဟာ သူ့ကို ဘာကြောင့် စိတ်ပျက်စေသလဲဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်ပြီး ဒီရာသီ title race ကို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ အိုဝင်